काठमाडाै । ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको विद्यार्थी भर्ना अभियान देशभर शुरु भएको छ ।
वैशाख २ गतेदेखि शुरु भएको भर्ना अभियानअन्तर्गत विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ । देशभर विद्यालय उमेर समूहका प्राथमिक तह (५–९ वर्ष उमेर समूह) का २.८ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको सरकारको तथ्यांक छ । विगतमा सरकारी औपचारिकतामा सीमित विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम नयाँ शैक्षिक सत्र २०७५ मा पहिलो पटक राजनीतिक अभियानका रुपमा मनाइँदैछ । विगतमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाले मात्र भर्ना कार्यक्रम मनाउँदै आएका थिए भने यस पटक प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च राजनीतिक तहबाट अभियानमा सहभागिता भइरहेको छ ।
साविक टाघनडुब्बा– ८ स्थित नमूना प्राथमिक विद्यालय अहिले झापा गाउँपालिका– ३ मा पर्छ । हरेक दृष्टिकोणले पछि परेको सो ठाउँका सर्वसाधारण शैक्षिक दृष्टिकोणले समेत अझैं पछि छन् । झापा गाउँपालिका–३ मा पर्ने गैरीगाउँमा कोच आदिवासी समुदायसहित सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायको बसोवास छ । यस ठाउँका अधिकांश बालबालिका अझै पनि विद्यालय बाहिर छन् । विद्यालय बाहिरका बालबालिकालाई शिक्षाको पहँुचमा ल्याउन झापा गाउँपालिकाले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । सोही क्रममा गाउँपालिकाले नमूना प्राविका विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सोमवारदेखि शुरु गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमला विश्वकर्माले बताउनुभयो । झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले अलका उराँव र गणेश उराँवका छोरा राजलाई नमूना प्राविमा भर्ना गर्दै अभियानको उद्घाटन गर्दै उनलाई विद्यालय पोशाक, पाठ्यसामग्रीसमेत प्रदान गर्नुभयो ।
सरकारले अभियानस्वरुप देशभर विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर माथि उठ्न नसकेको आरोप छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर माथि उठ्न नसक्नुमा समयनुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन नहुनु शिक्षकको ठम्याइ छ । सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको चासो कम हुनु र विद्यालय र अभिभावकबीच समन्वयको कमीका कारण सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर माथि उठ्न नसकेको झापा गाउँपालिका– २ का वडाध्यक्ष नेत्र खड्काको बुझाइ छ । सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि झापा गाउँपालिकाले अंग्रेजी माध्यमलाई निरन्तरता दिएको टाघनडुब्बा स्रोत केन्द्रका स्रोत व्यक्ति खड्गप्रसाद खरेलले बताउनुभयो ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, बैशाख ०४, २०७५१६:१८
महिला पत्रकारलाई अश्लिल भाषामा गालीगलौज गर्ने पत्रकार महासङ्घ सदस्य रिजाल निलम्बित !
मस्र्याङ्दीमा पौडी खेल्ने क्रममा नदीले दुई जनालाई बगायो !
सांसद भुसालद्वारा म्याराथुन प्रतियोगिताको उद्घाटन !
तीन जोडीको बालविवाह रोकियो !